Na ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọ bụ biakwa obibia na ndị na-na-kasị mma na ndị ọkaibe nchekwa ụlọ ọrụ dị na ụdị mpụga media nakwa dị ka USB ngwaọrụ nke a na-eji ugbu a. Ọ na-na--ahụ kwuru na hugeness nke data a ga-echekwara kwere ka ndị ọrụ na-arụpụta ihe kasị mma mgbe ọ na-abịa emepụta na ha kpebiri na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe nchekwa eweta . The USB draịva a na-mepụtara site na emepụta na nha nke 256MB, 512MB, 1GB na 2GB ma onye ọrụ na-abawanye na ina mere n'aka na ndị a na ụdị na nha na-adịghị eji ọzọ dị ka ina nke data transfer biliri na a zuru okè n'ụzọ ka anya dị ka USB technology e oru.
4 na-ewu ewu USB flash draịva
The draịva na yiri terminologies a ga-kọwaara onye ọrụ nke mere na ha na-kasị mma na ndị kasị elu technology. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ahịa na-atụnyere nke USB mbanye na-agụ nke ọma otú na oke ibu mfe. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke si USB ịzụta ahụmahụ nke ga-eduga ukwuu ezi ihe:
1. EMTEC - Pịa 16GB USB 2.0 Flash
The EMTEC mara maka kasị mma na ndị ọkaibe functionalities na mmekọrita USB na a 16GB multicolor dị USB mbanye ọ bụghị nanị na agbakwunyere kasị mma na ndị elu atụmatụ ma emewokwa n'aka na ọ na-akwado site ọtụtụ ndị USB ọdụ ụgbọ mmiri nke a na-ejikwara na usoro n'ụwa nile
Ọ bụkwa otu nke kasị mma draịva na USB 3.0 na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ bụ nchegbu banyere àgwà na data transfer ọsọ na maka otu ihe kasị mma nke kasị mma e nyere ka onye ọrụ na nke a.
3. Toshiba - TransMemory ID 16GB USB 3.0 Ụdị A
Ọ bụkwa otu n'ime teknụzụ na e agbakwunyere site Toshiba iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ a na-nyere ka onye ọrụ na nke a na ha nweta ihe kasị mma ọrụ. The klaasị ma ọ bụ ụdị A na-egosi na USB awade ndị kasị mma na ọhụrụ ngwọta:
SanDisk maa achoghidi Intro na niile dị ka ọ na-emepụta kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ maka ya ọrụ na-eme n'aka na ihe kasị mma e nyefewo ha n'aka-enweghị okodu ukwuu na USB na ajụjụ Umuihe otu nke kasị mma ihe atụ na nke a:
Aha na metrics
EMTEC - Pịa 16GB USB 2.0 Flash
Toshiba - TransMemory ID 16GB USB 3.0 Ụdị A
Uru na ọghọm nke draịva kwuru
N'okpuru ebe a bụ uru na ọghọm nke draịva na e kwuru n'elu dị ka kwa ha femụwe, imewe na n'ozuzu anya:
1. The Outlook nke mbanye bụ egwu na mara mma
2. The n'ozuzu femụwe nkwado bụ ọkaibe
1. The interface kwesịrị a oké njọ mbuli-elu
2. The n'ozuzu anya nwekwara ike enwekwukwa n'ihu iji nweta ọrụ.
1. The imewe nke USB mbanye bụ ọkaibe
2. The n'ozuzu interface nkwado bụ egwu na attains elu gbapụrụ ọsọ.
1. Onye ọrụ kwesịrị iji USB draịva na-elekọta ka ha na-esighị
2. The data overwritten bụ mgbe ụfọdụ otu ihe iseokwu ihu.
1. The USB ụgbọala anyị ukwuu ịga nke ọma na akada chọrọ a ego nke data na mgbe ahụ na-ebufe ya.
2. The USB interface bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na data na-agafere na a ngwa ngwa n'ụzọ.
1. The USB imewe kwesịrị mbuli-elu.
2. The n'ozuzu femụwe kwesịrị ime ka ike.
1. Ọ bụ a mbanye na-kụziri site na ike nke SanDisk
2. The n'ozuzu femụwe dị ike na a pụrụ ịdabere
1. The interface kwesịrị ka a uplifted
2. Onye ọrụ kwesịrị inwe ụlọ ọrụ na akara na aha SanDisk dị ka ọ bụ ihe kasị mma.
Isiokwu ọdịnaya nkọwa
Ke okpokoro n'elu 4 metrics nke Nyefee ọsọ, Usability, Ahịa, Rating na Comments na-eji na dịruru draịva nke na-n'aka na ihe ndị kasị mkpa yiri metrics na-abụghị nanị ekpe ikpe ma na-ele anya n'elu iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye kasị mma na ndị ọkaibe ọmụma na ikwu na draịva na-na-amụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara hụ na ndị metrics na-atụle ma na-na-etinyere dị ka ndị a na-ahụta ka ndị ị na-ekpebi ihe na-eduga ịzụta mkpebi na bụ maa mma. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mmekọrita na USB mbanye na e zụrụ.
Ọ na-ọzọ na-rịọrọ na-atụ aro ka ọrụ na ihe kasị mma na ọkaibe draịva na-na-ahọpụta na ya nwere ike mere site n'ịhụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke kacha mma amụọ-enweghị ihe ọ bụla ọzọ na-egbu oge site nnọọ amụ a nkuzi okwu site okwu. The draịva na-kwuru ebe a bụ ihe kacha mma na ya mere ha nwekwara ike zụrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Onye ọrụ kwesịrị ịgụ ọ bụla metric na-elekọta ka ọgwụgwụ. Onye ọrụ na onye na-ede akwụkwọ fim ga-emekwa ka a na-enyere aka na nke a.
Unformat USB: Olee otú naghachi faịlụ site formatted USB
Garmin USB Ndanda Stick Iweghachite iji weghachite Lost Arụ Ọrụ Data
Olee otú Naghachi Data si Xbox 360 Flash draịva
Mfe Way hazie Cruzer Fit Flash Drive Iweghachite
Olee otú Mepụta Bootable LiveBoot USB
> Resource> Flash Drive> Terabyte flash mbanye zoo - nyochaa maka poplular flash mere ihe karịrị 1GB